ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၀)
WaiHin Hein Thant's Blog on AMC
WaiHin's Linked In profile can be found here.
To find out more about WaiHin's insights, and startaconversation, you can contact WaiHin here.
Wai Hin originally comes from heart of traditional Myanmar, Mandalay.
Wai Hin obtainedaBachelor of Engineering University degree from Mandalay Technological University.
Subsequently he obtained his Masters of Business Administration (MBA) from The University of Mandalay.
His professional passion is in disciplines related to urban planning, and is currently inafinal phase of obtaining his second Masters, this time withaconcentration in Urban Planning, from Hiroshima University, in Japan.
WaiHin's ability to study in Japan came asaresult of his winningascholarship from JDS.
JDS (OfficiallyThe Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid supports human resource development of the Japanese grant aid recipient countries. JDS Project targets the highly capable young officials (mainly government) who are expected to engage in implementing social and economic development plans asafuture leader. JDS Fellows are also expected to contribute to the enhanced bilateral relations between their countries and Japan, with well-rounded knowledge of Japan. JDS Fellows will getaspecial opportunity for directly learning the forefront knowledge in the technological environment as well as for building the wide human networks.
In addition to his native Burmese, WaiHin is professionally fluent in English, and is learning Japanese.
WaiHin Hein Thant
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၂၂)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၂၁)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၂၀)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၉)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၈)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၇)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၆)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၅)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၄)
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၃)
ဒီတပတ်ရဲ့ အကြောင်းအရာပိုင်းဟာ အရင်အပိုင်း (၉) ရဲ့ အဆက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ....
ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုများခံစားလဲ .... ချမ်းသာပီး သက်တောင့်သက်တာရှိတယ်လို့ သူတို့တွေ ခံယူနိုင်ကြသလားဆိုတဲ့ သူတို့ လုပ်ထားတဲ့ စစ်တမ်းရဲ့ အဖြေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ..... အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အိမ်တစ်လုံးရဲ့ ပျမ်းမျှ ကြမ်းခင်းဧရိယာက ၁၆၀.၃ စတုရန်းမီတာ ဖြစ်ပါတယ် ..... ကိုယ်ပိုင်အိမ်တလုံးဟာ ၁၆၇.၉ စတုရန်းမီတာကျယ်ပီး အငှားအိမ်ဆိုရင်တော့ ပျမ်းမျှ ၁၁၈.၄ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပါတယ် ... ဒါကြောင့် အိမ်ငှားနဲ့ အိမ်ပိုင်ရဲ့ အကျယ်ကို အချိုးချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၀.၇၁ ရှိပါတယ် .... ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဘဝအပေါ်ကေနပ်သာယာမှုဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားပါတယ် ..... ဂျပန်မှာ ဆိုရင်တော့ အိမ်တစ်လုံးရဲ့ ပျမ်းမျှကြမ်းခင်း ဧရိယာက ၉၁.၉ စတုရန်းမီတာပါ ..... အိမ်ပိုင်က ၁၂၂.၁ စတုရန်းမီတာနဲ့ အိမ်ငှားက ၄၅.၁ စတုရန်းမီတာစီ ကျယ်ဝန်းကြပါတယ် ..... အိမ်ငှားနဲ့ အိမ်ပိုင်ကို အချိုးချကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ၀.၃ရ ပါ ... ဒီအချိုးဟာ နိမ့်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် .... ဂျပန်နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ကိုယ့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအပေါ် ကျေနပ်ခံစားနိုင်စိတ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျေနပ်ခံစားနိုင်မှုအောက် ထက်ဝက်လောက်ကို နိမ့်နေပါတယ် .....
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့နေသူတွေရဲ့ အလုပ်နဲ့ အိမ် အသွားအပြန်ကြာချိန်ကို ခန့်မှန်းသိဖို့ရန်အတွက် စစ်တမ်းကောက်ထားတာ တခုရှိပါတယ် ... တိုကျိုမြို့နေလူဦးရေစုစုပေါင်းမှ အယောက်တသောင်းကို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ အများစု ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ၅၃% လောက်က မိနစ် ၆၀ ကနေ ရ၄ မိနစ်လောက်ထိကို ကြာတာပါ .... ဒါဟာ တိုကျိုမြို့ရဲ့ ယေဘုယျ အလုပ်အသွားအပြန်ကြာချိန်ဖြစ်ပါတယ် ....
ဂပြနျနိုငျငံဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစျမှာ လူဦးရဟော ၉၅ သနျးရှိခဲ့ပီး ၂၀၁၀ ခုနှစျမှာတော့ ၁၂ရ သနျး ရှိခဲ့ပါတယျ .... လာမယျ့ ၂၀၅၀ ပွညျ့နှစျ ရောကျရငျတော့ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ လူဦးရဟော သနျး ၁၀၀ ပဲ ရှိတော့မယျလို့ ခနျ့မှနျးထားတာကွောငျ့ လူဦးရတေိုးပှားမှုနှုနျး ကဆြငျးမှုရှိတဲ့ နိုငျငံတှထေဲက တစျနိုငျငံ အဖွစျ ကမ႓ာပေါျမှာ လူသိမြားတာ ဖွစျပါတယျ .....
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (investment) ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အဓိက သော့ချက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရေးပါနေခဲ့တာလဲဆိုတာလည်း တချက် ကြည့်ရအောင်ပါ .... ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဘယ်လို အခြေအနေတွေအောက်မှာ ရှိနေတာလဲ ...
Typical Japanese Suburban Housing
(၁) သဘာဝရင်းမြစ်ကြွယ်ဝမှု မရှိဘူး
(၂) စစ်ကြီးပီးသွားတဲ့ အခါမှာ အလွန်အမင်းမြင့်တက်လာတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင်နှုန်း စတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ....
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ သုံးစွဲမှုကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ အစိုးရရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ၊ ပို့ကုန်မှရငွေတွေရဲ့ စုစုပေါင်းထဲကမှ နိုင်ငံအတွင်းကို တင်သွင်းလိုက်တဲ့ တင်သွင်းကုန်တွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို နှုတ်ထားတာဟာ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ ဝင်ငွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ....
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ငွေအရင်းအနှီးတွေကို တိုးပွားစေတယ် ..... တိုးပွားလာတဲ့အတွက်များပြားလာတဲ့ ငွေကြေး သို့မဟုတ် ထိုငွေကြေးများဖြင့် ဝယ်ယူထားသော စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပီး ထုတ်လုပ်မှုတွေများလာမယ် ထုတ်ကုန်တွေ တက်လာမယ် .... အဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေတက်လာတယ် ဆိုတာဟာ လုပ်သားထုရဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုတိုးတက်မြင့်မားလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် .... ဒါကြောင့် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ လုပ်အားခတွေက မြင့်လာတယ် .... လုပ်အားခတွေ မြင့်လာတယ် ဆိုတာက လုပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ယေဘုယျ ဝင်ငွေမြင့်မားလာတာဖြစ်ပီး အဲ့ဒီကနေ အစိုးရရဲ့ အခွန်အဖြစ်ရရှိငွေဟာ ပိုပီးတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ် .....
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဘယ်လို မတည်သုံးစွဲလဲ ......
အိမ်ထောင်စုတွေကနေ အများစုရတဲ့ စုဆောင်းငွေတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတယ် ..... ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ မတည်ဖို့ရာအတွက် ....
- စုဆောင်းမှုတွေကို ထပ်ခါ ထပ်ခါလုပ်ဖို့အတွက် တွန်းအားပေးတာတွေ လုပ်တယ်
- စစ်မှန်တဲ့ အတိုးနှုန်းကို ပေးတယ်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကိုလည်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာထားတယ်
- ခိုင်မာမှုရှိပီး ယိုပေါက်မရှိတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထူထောင်ပီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်
ဒီလိုမျိုး တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုမျိုးမရှိဘူးလို့ ဆိုတဲ့ ဘဏ္ဍရေးယန္တရားတစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ငွေတွေကို ထုတ်ချေးဖို့ရာ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်လာကြပါတယ် .....
Main Bank လို့ပြောတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စံနစ်ဟာ သူတို့ သတ်မှတ် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကဏ္ဍတွေနဲ့ ဦးဆောင်းအလုပ်လုပ်သူတွေကို အင်မတန်သက်သာတဲ့ အကြွေးပေးစံနစ်ကို ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ကြပါတယ် .... ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ရန်အတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ဒီစံနစ်ကြီးတခုလုံးကို စက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်လစီ မူဝါဒတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ....
In WaiHIn Hein Thant's Blog Tags Myanmar, Letters from Japan, Japanese Housing, Japanese Transportation, Japan
← ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၁၁)ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း (၉) →